Ezona zilungileyo ze-s-pen zokusebenza ze-samsung galaxy note 8
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Eyona misebenzi ilungileyo ye-S-Pen ye-Galaxy Note 8
Eyona misebenzi ilungileyo ye-S-Pen ye-Galaxy Note 8
Ke, unezandla kwi-Samsung & apos; s Galaxy Note 8 entsha kwaye ujonge iinkqubo ezintsha ezisebenzisa ifowuni-apos S-Pen? Okanye mhlawumbi wena & apos; sibiyile ngocingo kwaye ujonge kwinto epeyintiweyo kunye nesoftware kwiNqaku 8? Nokuba yeyiphi na indlela, into esinayo kuwe namhlanje luluhlu lweeapps esizithandayo esizisebenzisayo kunye ne-S-Pen! Ayilulo uluhlu olupheleleyo, kodwa iqulethe zonke izinto eziphambili esithe sazifumana ngelixa sibhala kwaye sisusa inqaku 8!
Sifaka zombini imveliso-kunye nokuyila okujolise kuluhlu lwethu, nangona masijongane nayo-usetyenziso loyilo lwe-S-Pen ngokuqinisekileyo luyazigqwesa izinto zalo ezivelisayo (kwezakho izimvo kunye neepos)! Abanye banokuthi bathande ukubhala phantsi amanqaku, okanye ukuskrolela amaphepha ngokuhambisa ipeni kwi-bezel ephezulu okanye esezantsi, okanye mhlawumbi uguqulele onke amaphepha okubhaliweyo kubhabho. Kodwa kwiindidi zokuyila phaya, i-S-Pen ingaphezulu kakhulu kunoko. I & apos; s—kakuhle-Ip & apos; ipeni! Kwaye inephepha ledijithali elinokuhamba nayo! Okanye ngaba yenye indlela ejikelezileyo? Bah, ayinamsebenzi! Into endiyifumanayo apha, kukuba ngokuqinisekileyo kukho uninzi lweapps ezibalaseleyo phaya ezithi zisebenzise amandla e-S-Pen kunye neapos; kwaye zijolise ekudalweni komxholo. Ukuba ufuna ukubhala phantsi amanqaku, awuzange uphinde ugqunywe!
I-AutoDesk SketchBook (kunye nayo yonke Isoftware ye-AutoDesk )
Ukuthenga simahla / ngaphakathi nohlelo
I-AutoDesk SketchBook AutoCad BIM amaXwebhu ama-360
I-AutoDesk & apos; s I-SketchBook yinkqubo yokuqala endiyicimileyo xa ndibeke izandla zam kwiGalaxy Tab kunye nenkxaso ye-S-Pen kwithuba elidlulileyo. Ngokuqinisekileyo ayisiyiyo & apos; esona sixhobo sokuzoba sibaluleke kakhulu kwizikrini zokuchukumisa phaya, kodwa qiniseka ukuba sisinye isipho esomeleleyo! ISketchBook ibonelela abasebenzisi ngobuninzi bezixhobo zokudlala kunye nazo, ezinjengeentlobo ezahlukeneyo zeebrashi zepeyinti, iipensile ezinokwenziwa ngokwezifiso, iipeni, kunye neziphawuli- kunye nezitampu ezininzi, kunye neepos; iibhrashi zeemilo, ukuba loo & apos ingaphezulu kwejam-njenge Kunye nomhleli ogcweleyo onamaleko ukuya kuthi ga kwimiqolo emi-3 kunye neendlela ezili-16 zokudibanisa. Ngaphandle kokungena kwiinkcukacha ezininzi, iSketchBook ikwanazo neendlela zezibuko ezizibonisa ngokuzenzekelayo nantoni na oyidweyayo ngeendlela ezahlukeneyo, kunye nezixhobo eziguqulwayo, kunye nexesha lokurekhoda eliphelelwa lixesha ekuvumela ukuba urekhode iividiyo ezingaphakathi nohlelo zenkqubela phambili yakho ukuze wabelane nabanye. Ucocekile!
Kodwa iSketchBook ayisiyiyo kuphela app eyoyikekayo yonjiniyela we-AutoDesk, ethi yona ikwayinkampani enye emva kwesoftware eyaziwayo yokuyila isoftware i-AutoCad. Ndikucebisa ukuba ujonge yonke into enikezelwa yi-AutoDesk (ethi,Ewe, kubandakanya uguqulelo lweselfowni lwe-AutoCad), njengoko kukho ishumi elinambini okanye limnandi kakhulu, iiapps eziluncedo kakhulu ekunikezelweni, kwaye zonke ziyimidlalo efanelekileyo yeNqaku 8 kunye ne-S-Pen yayo!
I-Adobe Illustrator Dweba (kunye nayo yonke Inkqubo yeAdobe )
Isimahla / ifuna ubhaliso lweAdobe CC kwezinye zeempawu
I-Adobe Illustrator Dweba I-Adobe Photoshop Express Iklip ye-Adobe Premiere
Kunzima ukukhetha inye kuphela kwiAdobe & apos; isuti efanelekileyo yoyilo losetyenziso lwe-Android. I-Photoshop Express inako konke kwaye iyaziva zilungile kwiNqaku 8 ngokunjalo, kodwa ukuba & nathi sithetha ngamava aqhutywa yi-S-Pen, iAdobe Illustrator Draw yinkqubo yakho. Sisixhobo esimangalisayo esikuvumela ukuba wenze imizobo yevektha ekuhambeni, onokwabelana ngayo phakathi kwe-Illustrator / Photoshop CC kwiPC yakho okanye kwiLaptop!
I-Adobe Illustrator Dweba inebhodi yolawulo olupheleleyo (ukuya kuthi ga kusetyenziso lweeselfowuni), ngenkxaso yokuqamba igama ngokutsha, ukuphinda kabini, ukudibanisa nokulungelelanisa umaleko ngamnye. Kwaye kukho iiapos zengqondo-evuthela i-64x zoom yokungena ngokwenene kwi-nitty gritty yayo (nangona kungekho & apos akukho grit yokwenyani xa usebenza ne-Illustrator & apos; s veist pristine vectors), kunye nokubanakho ukuthumela ifayile yemveli ehleliweyo ku-Illustrator okanye ifayile ye-PSD kwi-Photoshop eya kuthi ivuleke ngokuzenzekelayo kwidesktop yakho, eyi-godsend nje.
Ewe, ukuba ungumbhalisi weAdobe CC, kukho iitoni zezinye izinto onokungena kuzo, ezinjengeLifu leLifa lencwadi kunye nokuvumelanisa kweqonga, kodwa thina sizakushiya ezi zinto okwangoku.
Iphepha le-Bamboo yenye yezona ncwadana zedijithali zibanzi ozokufumana phaya, kwaye iza ngqo kwi-masterminds kwa-Wacom. I-apos ngokwenene ininzi kakhulu kunokuba yinkqubo yokuthatha inqaku, le. Ngokuqinisekileyo ithambekele ngakumbi kwicala lemveliso kwibala, ngokolu luhlu luchaphazelekayo, kodwa iphepha le-Bamboo livumela ubuninzi bobuchule ngokunjalo. Cinga nje nge-app elula yokuthatha amanqaku, kodwa ngakumbi njenge-albhamu yedijithali apho uveza khona izimvo nge-inki kunye nepeyinti, chaza iikhonsepthi ngeefoto, nokunye okuninzi.
Ukuba ukhangele iapps yeqonga enqamlezayo ene-synch yelifu kunye nazo zonke iintsimbi kunye neempempe, ungajongi ngaphaya kwephepha le-Wacom kunye neapos; Bamboo.
I-squid lolunye usetyenziso lokuthatha amanqaku olusebenzisa kakuhle i-S-Pen. Kodwa ayikhathali ukuba awusebenzisi ipeni okanye umnwe wakho, ayifuni nje ukuba uthayiphe kwikhibhodi yedijithali! I-apos iyinto entle ehlaziyayo yokuthatha incwadana yedijithali kunye neyo inikezela konke ukusebenza okulindelweyo kwi-app enjalo, kodwa uyikhuphe ngentloko ngeempawu ezijolise kubasebenzisi bamandla.
Ezinye zeempawu ze-squid & apos; zokuma ngaphandle kubandakanya izixhobo ezikhawulezayo zokukhetha ezikuvumela ukuba ukope / uncamathisele izinto phakathi kwamaphepha, amanqaku okuthumela ngaphandle njengePDF, kunye negama 'lebhodi emhlophe' ecocekileyo ekuvumela ukuba usebenzise isixhobo sakho njengebhodi emhlophe yedijithali ngexesha lomnxeba wenkomfa (nangona awudingi iMiracast okanye iChromecast yalowo). Ngapha koko, i-squid isekwe kwi-vector-based, oko kuthetha ukuba ungawenza kwakhona amanqaku akho kunye nokubhala kwintliziyo yakho kunye nomxholo ngaphandle kokuyekisa umgangatho!
Ipeyinti ye-MediBang yipeyinti yasimahla esetyenziswa kakhulu kwi-S-Pen ye-Samsung kunye neapos; s. Emva kokuvula usetyenziso okokuqala, uya kudibana nendlela yokuhamba malunga nobunzima, kodwa ubutyebi bexesha elizayo, ujongano, kunye nengcebiso yam iya kuba kukuthathela ingqalelo! I-MediBang & apos; ujongano ayisiyiyo yonke le nto inzima, kodwa kukukhala okude ukusuka kwiSketchBook & apos; ubugqwetha obuncinci, kungathatha kancinci ukuqhela. Kodwa kwelinye icala, ikunika inkululeko eyilayo ngakumbi ngezixhobo ezininzi kunye neendlela onokukhetha kuzo. Ngeebhulashi ezingaphezu kwe-100 kunye nezinye izixhobo, kunye nemvelaphi engaphezulu kwe-850 kunye nezinto ozisebenzisayo kwindalo yakho, ukuba ngaba ukusebenza kwakho kuyinjongo yakho yokuphela, iMediBang Paint iqinisekile ukukholisa.
Ngexesha lethu kunye neapp, sifumanise ukuba ukuzoba nge-S-Pen kuziva ngathi kunamanzi kwaye kuyaphendula, ngakumbi xa usebenzisa ipeyinti, iibhrashi zishiya imivumbo emibalabala kwi-canvas yedijithali. Njengoko kunokulindelwa, iMediBang Paint ixhasa izendlalelo, ukuvumelanisa ilifu, nokunye okuninzi, kodwa ezinye zeempawu zifuna ukuba wenze iakhawunti ye-MediBang (yasimahla).
Ibhonasi: Funda ukuzoba
Kulungile, ke thina & iiapos zethu zibonise uninzi lweeapps ezigqwesileyo, ezijolise kubuchule kolu luhlu, kodwa ukuzisebenzisa ngokupheleleyo ezinye zazo, kuya kufuneka umntu abe nesiphiwo esincinci ngepeni. Kwaye abo kuthi bangabikho & apos, t,kakuhle,singasoloko sifunda, asikwazi & apos? Kungenxa yoko le nto nathi sibonisana nendlela yokuzoba kolu luhlu.
Uhlelo lokusebenza lubonisa uninzi lwezifundo, ezigubungela amanqanaba okuqala, aphakathi kunye namanqanaba aphezulu, kwaye nangona uninzi lwezixhobo apha luchaphazeleka ikakhulu kukuzoba isitayile sencwadi yokuhlekisa, kukho izifundo ezibalulekileyo ezingafunyanwa. Ukufumana ukuxhonywa kwendlela yokuzoba umzobo womntu ngeendlela ezahlukeneyo zokuma, okanye ubuso obahlukileyo obuhambisa iimvakalelo ezahlukeneyo, ngaphandle kokungena nzulu kwizifundo ze-anatomiki, yinto uninzi olunokuthi lufumanise iluncedo.
Umxholo we-ios wesiqalisi se-nova
IVerizon iphuma yonke kwimizamo yayo yokuvala isikhewu sokugubungela i-5G kwiT-Mobile
Yiza nePixel 2 okanye iPixel 2 XL yakho kwiT-Mobile kwaye ubuyisele ama-34% ukuya kuma-50% kwixabiso lakho lokuthenga
I-Samsung Galaxy S9 + vs iPhone X vs Pixel 2 XL vs Galaxy Qaphela 8: Ikhamera ephantsi yokukhanya